Site na friji fulasia ruo n'uwe odo - AFRIKHEPRI
Site na Phrygian ruo uwe odo
Ihe omimi nke Pyramid nke China - Akwụkwọ (2016)
monday, Julaị 6, 2020
Ebee ka okpu "Marianne" sitere?
Marianne bụ otu n'ime akara nke French Republic na webata Republic ahụ dị ka ọkọlọtọ tricolor. Marianne na-anọchite anya ịdịgide adịgide nke ụkpụrụ na-eme ka njikọ nke ụmụ amaala na Republic pụta: Nnwere Onwe, Ịha Nhata, Agbụrụ ". A Marianne bụ nwa nwanyị nwanyị yi okpu nke Frijia. Ya mere okpu Frijia sitere na mgbe ochie a burula akara nke nnwere onwe. N'okpuru nduzi nke Jacobins, okpu uhie ahụ ghọrọ ihe nnọchianya dị mkpa nke mgbanwe ahụ. N'oge mgbanwe nke French, ngịga nke mbụ na Frijia pụtara n’isi ndị French, ọnwa ole na ole mgbe ebili mmiri Bastille gasịrị. Ejiri akwa na-acha uhie uhie mee ha, wee jikọta uwe mwụda nke ndị nnupụisi kachasị ike, bụ sans-culottes. Yiri okpu Frijia n'ezie bụ ụzọ isi gosipụta ịhụ mba n'anya gị. Okpu a bụ otu n'ime ihe akọwapụtara na June 20, 1792, bụ ụbọchị akụkọ ihe mere eme nke hụrụ ndị mmadụ na-awakpo ndị obodo Tuile. Ndị ahụ na-agbagharị mgbanwe nakweere ya iji gosipụta mgbanwe nke ọchịchị.
Gịnị bụ “akwa odo”?
Akwa akwa visibiliti ma ọ bụ mkpuchi nchekwa bụ akwa visibilụ elu nke a na-ewere dị ka ngwa nchedo onwe onye (PPE), nke e zubere iji melite ọhụhụ onye na-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị ize ndụ. Site n'iyi uwe na-acha odo odo, ndị ngagharị iwe ahụ chọrọ igosipụta n'otu aka na ha chere na echefuru echefu, n'anya nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eleghara ọnọdụ ibi ndụ ha anya ma ghara ime ihe ọ bụla iji melite ya. Ha chọrọ ịbụ “SEEN” ma maka nke a ha gosipụta uwe ngosipụta dị elu na ụzọ ndị isi ọchịchị. N'aka nke ozo, ha na-eyi akwa mkpuchi a n'ihi na ha na-eche ịgbanwe n’usoro a ọnọdụ nkatọ nke ha gosipụtara obi erughị ala. Ha nwere ihe egwu na “IHE OBI”
Gini bu ije “ogwe odo”?
Mgbanwe vests edo edo bụ mkpesa a na-akwadoghị na iwe iwe mmekọrịta nke pụtara na France na Ọktoba 2018.
Gini bu akara eji acha odo odo?
Ihe ngosi nke ngagharị iwe zuru ụwa ọnụ, mmeghari nke akwa odo na-agbasa ma na-agbasa ebe niile na Europe na ụwa (Belgium Bulgaria na Netherlands, Serbia, Iraq…)
Ngosipụta nke nsogbu nsogbu na ngosipụta nke ọgba aghara obodo, akwa mkpuchi edo edo chọrọ ọ bụghị naanị mmelite n'ụkpụrụ obibi ndụ ha na ike ịzụta ha karịa karịa ịha nhatanha na ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ na mgbanwe mgbanwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa.
Obi ụtọ !!!
AHỤ: Historia Review, N679, July 2003, 22 Page
Atiya ỤLỌ NNA
Gịnị mere ndị Africa ji agụ akwụkwọ ha na ụmụ ha?
Nkwado Afrikhepri - Nye
Gịnị bụ ezigbo kamite?
Agụmakwụkwọ nke nwata site na echiche nke sayensị ime mmụọ - Rudolf Steiner (PDF)
Mmanụ aṅụ, nri nke chi
Pịa n'okpuru iji bipụta edemede
Afrikhepri Foundation sur Nwata nke nna-ukwu - Akwụkwọ edemede (2018): "Pụrụ iche njem nke nna ukwu ime mmụọ n'ọdịnihu: Akwụkwọ edemede mara mma!" Jul 6, 01:32
Afrikhepri Foundation sur Agha nke Mkpụrụ - Akwụkwọ (2016): "Anyị ga-enweta nri GM naanị site na ahịhịa transgenic n'ime afọ 15!" Jul 6, 01:27
Afrikhepri Foundation sur Lelee nhazi nhazi 2 (2018): "Ezigbo ihe nkiri ị ga - ahụ!" Jul 6, 01:21